[Official] dr.fone - A Toolkit ho an'ny iOS sy Android rehetra Users
Andramo Tsy Free
iOS Data Backup & Ampodio
iOS WhatsApp Transfer, Backup & Avereno
iOS Viber Backup & Ampodio
iOS Kik Backup & Ampodio
iOS LINE Backup & Ampodio
iOS Full Data gaoma
iOS Private Data gaoma
SIM hamaha Service
iOS Screen mpitam-boky
Android Data fitrandrahana
Android Data Backup & Ampodio
Android SIM hamaha
Android Data hamafa
Android Screen mpitam-boky
MirrorGo Android mpitam-boky
Mobile olana, fitaovana hamahana azy ireo.
Ny fitaovana rehetra tokony hitandrina ny finday mihazakazaka amin'ny 100%.
Andramo izany maimaim-poana hanandrana azy io maimaim-poana
iOS iOS Screen mpitam-boky
iOS LINE Data Backup & Ampodio
iOS Kik Data Backup & Ampodio
iOS Viber Data Backup & Ampodio
Android Data gaoma
More finday fitaovana
PCWorld, mpitarika famerenana toerana ho an'ny solosaina, takelaka, iPads, biraonao PCs, pirinty.
Lifehack, loharanom ny toro-hevitra mba hanampy hanatsara ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika.
CNET, mamantatra ny toerana rehetra ny teknolojia farany breakthroughs mpanjifa.
Softonic no toerana mba hahita ny tsara indrindra ho an'ny fitaovana fangatahana.
Ny mpanjifa tia dr.fone
ianao dia, koa.
Io fandaharana no nanao ny zavatra rehetra nilaiko azy hanao sy ny maro hafa. Rehefa nianjera ny solosainako Tsy ampy iray volana taorian'ny Nividy ny fandaharana, Wondershare 'ny Support pejy nitari-dalana ahy amin'ny alalan'ny indray ny fisoratam ny vokatra. Couldn''t ho sambatra kokoa.
Works isaky ny
Manana ny angon-drakitra tapaka Android rindrambaiko fanarenana nandritra ny fotoana kelikely dieny izao, ary efa nampiasa azy amin'ny birao samihafa finday. Tsy afaka mino firy nopotehiny finday hatao isan-kerinandro. Izany Tena manampy amin'ny mpanjifa nahazo antontan-taratasy manan-danja antsipirihany sy amin'ny fitaovana.
amin'ny alalan'ny ekipa Setcom IT, Android
Tsara indrindra rindrambaiko for iOS
Dr. Fone manana mampino tsotra UI amin'ny nanazava mahagaga dingana-by-dingana toromarika, ka na inona na inona mety afaka mandeha diso. Izany no tsara indrindra Data Recovery Software tonga manerana aho.
ny Tyrone Williams, iOS
dr.fone Toolkit - Android Data Recovery vokatra
Dr.Fone no vokatra farany mampino namoronana azy, tsy mety resy, Tsy nieritreritra eny, mahagaga hevitra, trully lehibe. Zavatra tsy afaka miteny ianao hoe, Dr.Fone nanova ny endriky ny Android mihitsy ho marika tarehy vaovao. Dr.Fone miasa amin'ny teknolojia isan-karazany, fitaovana tsara na dia nidina ho any amin'ny kely indrindra Chip madinika. Dia ho tonga tontolo manodidina ny maro, mahagaga vaovao volony, Tsy izay ihany, ny fomba afaka manao ny zava-drehetra sy ny na inona na inona. na inona na inona ary na izany aza. Tena misy heriny ny manana.
ny Gerard Katu, Android
Isaorana Andriamanitra fa izany fandaharana izany manao fahagagana !!!!!!!!! Tsy nahita ny txt rehetra izany aho nitady im faly Eek =) no tanteraka ny fahazoan-dalana hidirana izany =) Andriamanitra Misaora
ny Eduardo, iOS
Nieritreritra aho efa very ny zanako-vavy mamy 16 fitsingerenan'ny andro nahaterahana sary sy lahatsary mandrakizay. Ity rindrambaiko namonjy ny adala !! Raha nisy ambony ampy, Dr Fone azo antoka ho iray mba haka izany amiko. Ary tsy mbola nahita na inona na inona izay nahatonga ahy hihevitra fa lalana eo. Nandeha an-tserasera mihitsy aza aho mba hitady ny tapakila fehezan-dalàna satria ny vola no izy fa ambany couldn''t manam-bola izy ka efa nitomany mandra-hitako iray ka naka izany ho antsasaky ny vidiny !! Misaotra anao dr.fone !!
ny Darlene, Android
mifidy ny teny
Izany manova ny teny ao amin'ny pejy. Dia tsy hanova na lahatsoratra niditra ny mpampiasa
Copyright 漏 Wondershare . Zo rehetra voatokana.